OfferUp - Buy. Sell. Offer Up 3.54.0 အန္းဒ႐ိုက္ APK ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ | Aptoide
OfferUp - Buy. Sell. Offer Up ၏ ရွင္းလင္းခ်က္
Buy ။ ရောင်း။ ရိုးရှင်းတဲ့။
OfferUp သင်လိုချင်သောအရာတို့ကိုအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောအပေးအယူကိုရှာဖွေ, သင်ရောင်းချင်သောအမှုအရာအပေါ်ငွေရှာဖို့လွယ်ကူစေသည်။ အဆိုပါ Classified ကြော်ငြာနှင့်ကားဂိုဒေါင်ရောင်းအားမြောင်း - ဤသူသည်သင်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်လူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ဝယ်ရောင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
•ဘာမှဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်; အလွယ်တကူစက္ကန့် 30 အတွင်းရောင်းချရန်အဘို့သင့်ပစ္စည်းများတက်ကိုဆက်ကပ်။
•အဝတ်, ပရိဘောဂ, ဆဲလ်ဖုန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ကလေး & လေးတွေပစ္စည်းများ, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများသုံးကားများနှင့်ပိုပြီးအပေါ်ကြီးစွာအပေးအယူများနှင့်အထူးလျှော့စျေးရှာပါ။
•နေ့စဉ် New post ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူရောင်းချရန်ဒေသခံပစ္စည်းများ Browse ။
• app ကိုအတွင်းကနေလုံလုံခြုံခြုံကို Message ဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူ။
•သင့်ထူးခြားတဲ့ရောင်းချသူပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာနှင့်သင်၏ဂုဏ်သတင်းကို Build ။
•အမျိုးအစားသို့မဟုတ်တည်နေရာအားဖြင့်ပုံရိပ်နှင့်မျိုးများက Browse ကိုပစ္စည်းများ။
•တိုင်းပြည်အနှံ့ OfferUp သုံးပြီးလူသန်းပေါင်းများစွာကို Join ။
•ကားဂိုဒေါင်ရောင်းချ Skip! OfferUp ဒေသအလိုက်ဝယ်ရောင်းဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်အလွယ်တကူအီလက်ထရွန်းနစ်မှအဝတ်အနေဖြင့်ကားဟောင်းရန်, ဘာမှရောင်းချနိုင်ပါတယ် OfferUp အတူ 1. ။
2. OfferUp ညာဘက်သင့်ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အနီးအနားမှာရောင်းချမယ့်သင်သည်အဘယ်သို့ပြသထားတယ်။
ဝယ်လက် & ရောင်းသူအကြား 3. ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံစာပို့ခြင်းကနေတစ်ဆင့် App ကိုတဆင့်ဖြစ်ပျက်။
4. OfferUp တစ်ကားဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်းထက် သာ. ကောင်း၏; ညာဘက်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်သင်တစ်ဦးလျှော့စျေးမှာချင်တယ်ဘာမှ, ရှာပါ။
ကျနော်တို့ဒေသခံဝယ်အောင်လူတိုင်းကြိုးစားယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုရောင်းချနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်၏စိတ်နှလုံးမှာအသိုင်းအဝိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့စေသည်အရာဖြစ်တယ်။ သငျသညျ OfferUp join အခါ, သငျသညျအသီးအသီးအခြားအကူညီပေးနေလူသန်းပေါင်းများစွာပူးပေါင်းဖွင့်ငွေရှာနှင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းပိုက်ဆံကယ်တင် - နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်း၌တရား။
OfferUp - Buy. Sell. Offer Up ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မ်ား
APK သတင္းအခ်က္အလက္ - OfferUp - Buy. Sell. Offer Up